मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम संचालनका लागि ६ कम्पनी सर्टलिस्टमा, कसले मार्ला बाजी ? - Technology Khabar
» मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम संचालनका लागि ६ कम्पनी सर्टलिस्टमा, कसले मार्ला बाजी ?
Technology Khabar ७ कार्तिक २०७५, बुधबार
काठमाडौँ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडिएमएस) (Mobile Device Management System) संचालनका लागि ६ वटा कम्पनीहरुलाई छनौट गरेको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि आव्हान गरेको सूचनाको आधारमा एमडिएमएस सेवा नेपालमा डिजाइन, विकास, आपूर्ति, इन्स्टल, परिक्षण र संचालन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण जिम्मेबारी पुरा गर्नका लागि ६ कम्पनीहरुको छनौट गरेको हो ।
छनौट भएका कम्पनीहरुमा
यी कम्पनीहरुमध्येबाट आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव मागेर त्यसको आधारमा एउटा कम्पनी छनौट गर्ने प्राधिकराणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
‘हामीले यसअघि एमडिएमएस संचालन गर्न चाहने कम्पनीहरुका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौं र इच्छुक कम्पनीहरुमध्ये ६ वटा कम्पनी छनौटमा परेका छन्, यी मध्ये एउटाले सो प्रणालीको सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ,’ प्रवक्ता अर्यालले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।
उनका अनुसार यो प्रकृया सकेर एउटा कम्पनी छनौट गर्न करिब २ महिनाको समयावधि लाग्नेछ । नियमित प्रकृयाअनुसार नै निरन्तर काम भएमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै एमडिएमएस शुरु हुने प्रवक्ता अर्यालको भनाई छ ।
यी कम्पनीहरुमध्ये जून कम्पनीले आर्थिक रुपमा सस्तो मूल्यमा सो प्रणाली संचालन गर्ने प्रस्ताव गर्दछ त्यसलाई नै संचालनको अनुमति दिईनेछ भने सो कम्पनीको प्राविधिक क्षमता र सक्षमता पनि हेरिनेछ । प्राधिकरण भित्रकै अध्ययन, मूल्यांकन तथा छनौट समितीले उल्लेखित ६ कम्पनीहरुको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावको अध्ययन गरेर त्यसमध्ये उत्कृष्ट ३ कम्पनीको सूची तयार पार्नेछ । सो उत्कृष्ट ३ मध्ये एउटा कम्पनीलाई प्राधिकरण बोर्डले प्रणाली संचालनको अनुमति दिनेछ ।
यस प्रकृयाबाट छनौट भएको कम्पनीले नेपालमा एमडिएमएस प्रणालीको सम्पूर्ण कार्य गरेर नेपाल भित्रने र प्रयोगमा रहेका डिभाइसहरुको आईएमईआई दर्ता गर्ने कार्यको जिम्मेबारी लिनेछ । छनौट भएको कम्पनीले एमडिएमएस सेवा नेपालमा डिजाइन, विकास, आपूर्ति, इन्स्टल, परिक्षण र संचालन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण जिम्मेबारी लिनुपर्नेछ । यस्तो प्रकृयाको लागि कम्तिमा ४ महिना लाग्ने हुन्छ ।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७५, बुधबार
सीजी टेलिकमलाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको लाइसेन्स, इन्टरनेट ब्याण्डविथ आयात र बिक्री गर्न सक्ने